iPhone4မှာဇော်ဂျီသွင်းတာerror — MYSTERY ZILLION
ကိုစေတန်ရဲ့ zawgyi iOS 4.3 package ကို သွင်းဖို့အတွက် အဟောင်း iOS>4.1 ကို ပြန်ပြီး uninstall လုပ်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့်.. သိတဲ့အတိုင်းပဲ itune ကနေ restore ပြန်လုပ်လိုက်ရပါတယ်..
အသစ်ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ အပေါ်ကပြောတဲ့ zawgyi iOS 4.3 အသစ်ကို cydia ကနေ သွင်းလိုက်ပါတယ်.. စာတွေကတော့ ပြန်ဖတ်လို့ရသွားပေမယ့်.. zawgyi keyboard ပါမလာတော့ပါဘူးခင်ဗျာ.. :-(( အဲ့ဒီမှာ စတွေ့တော့တာပဲ..
ဒါနဲ့ပဲ cydia ကနေပဲ.. အဟောင်းဖြစ်တဲ့ zawgyi keyboard iOS 4.1 ကိုပြန်သွင်းတာ.. အောက်ကပုံအတိုင်း.. error တွေတတ်လာပါတော့တယ်..
အဲ့ဒီလို error တတ်လာတော့.. အသစ်သွင်းထားတဲ့ zawgyi iOS 4.3 package ပြန်ပြီး uninstall လုပ်.. ပြီးတော့ zawgyi keyboard iOS 4.1 ကိုပြန်သွင်းပေမယ့်..လုံး၀မရတော့ပါဘူး.. စာလည်းမမြင်ရတော့ဘူး..ကီးဘုတ်ဆို လုံး၀မတွေ့ရတော့တာပါ..
ဘာ Crash တွေဖြစ်သွားတာလဲမသိတော့ဘူး..
ဒါကြောင့် ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာကို လမ်းညွန်ပေးပါဦး.. zawgyi iOS 4.3 package ကို ပြန်သွင်းရင် မြန်မာစာ ပြန်မြင်ရပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ကီးဘုတ်မပါပါဘူး.. ဒါကြောင့် zawgyi keyboard iOS 4.1 က ဖောင့်ကော.. ကီးဘုတ်ကော ၂ မျိုးလုံးကို တစ်ခါတည်းသွင်းလိုက်တာကြောင့် error ဖြစ်သွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်..
ဒါကြောင့်မို့လို့.. ကီးဘုတ် ၁ မျိုးထဲကိုပဲ.. ဒေါင်းလုပ်ချပြီး SFTP ကနေ သွင်းရင် ဖြစ်နိုင်မလားဆိုတာကိုလည်းသိချင်ပါတယ်.. သွင်းလို့ရခဲ့ရင်လည်း root/... စသည် လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်း တစ်ခါတည်း လမ်းညွန်ပေးစေချင်ပါတယ်...
စာဖတ်လို့ရပေမယ့်..စာရိုက်လို့မရတဲ့ အခြေအနေက တော်တော်လေးကို ခံစားရခက်ပါတယ်.. သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးက ဇော်ဂျီဖြစ်နေသေးလို့.. ဇော်ဂျီနဲ့ပဲ ဖုန်းကနေ ရိုက်နေရတာပါ..
Can u restore ?? If after restore only need to install zawgyi keyboard for iPad 4.2 or later ..although it's say for keyboard surely included font as well.
Sorry for that i can't explain to you how to install the way u ask, SFTP...
still not support zawgyi keyboard for iOS 4.3. So, don't try to install it.
အခုတော့ရသွားပါပြီ.. ဘယ်လိုလုပ်လိုက်သလဲဆိုတော့.. အဟီးးး တစ်နေကုန်သွားတယ်..
ကျွန်တော် restore လုပ်လိုက်ပါတယ်.. အခုထွက်နေတဲ့.. www.jailbreakme.com ကိုမသုံးပဲ.. redsn0w နောက်ဆုံးဗားရှင်းနဲ့ပဲလုပ်လိုက်ပါတယ်..
ပြီးတော့မှ ကိုစေတန်ရဲ့ http://cydia.macforus.com ကနေ ios>3.2 system fonts replace ကို တင်ပါတယ်.. restart လုပ်ပါတယ်.. ပြီးတော့မှ Zawgyi keyboard iOS 4.1 ကိုပြန်တင်ပါတယ်.. ဒီမှာက Fonts & Keyboard ပါပြီးသားဖြစ်နေတော့.. iOS>3.2 ဖောင့်နေရာကို အစားထိုး လိုက်တယ်ထင်တယ်.. ဖောင့်ချင်းက အတူတူ ဖြစ်နိုင်လို့ ရသွားတာလားတော့မသိဘူး.. အခုတော့ ကီးဘုတ်ကော.. ဖောင့်ကော ၂ မျိုးလုံး ပြန်အဆင်ပြေသွားပြန်ရော..
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. မလုပ်ရင်လည်းမသိနိုင်ဘူး လုပ်လိုက်တော့လည်း.. တစ်နေကုန်သွားတယ်.. ဟူးး...
Lion ထွက်ပြီးရင် .. နောက်ပိုင်း iPhone တွေမှာလည်း အလိုအလျှောက် မြန်မာစာ ပါလာမှာလားမသိဘူးနော်.. ပါလာရင်တော့ ယူနီကုဒ်ရတော့မှာပါ.. အဟိးးး.
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. အခုဖုန်းရဲ့ ဗားရှင်းကတော့. 4.3.3 ပါ..
soemon႑@ က သင်ပေးမာလား ...
ကျနော် က iso 5.0.1 ကီးဘုတ်ရဖူး